Njem Nleta Estonia na-akọ akụkọ ọhụụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ebe ngosi ihe mgbe ochie
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Njem Nleta Estonia na-akọ akụkọ ọhụụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ebe ngosi ihe mgbe ochie
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Akụkọ gbasara Estonia • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Gaa Estonia na-akọ akụkọ ọhụrụ na ndị nleta ihe ngosi nka na 2017. Maka oge mbụ, ihe karịrị nde 3.5 gara na ebe obibi ihe ngosi nka ka edekọtara, 50,000 karịa 2017.
Lọ ngosi ihe mgbe ochie na-aga n'ihu na-ewu ewu n'etiti ndị njem nleta na-eleta Estonia na 35% nke nleta edere ede sitere na ndị ọbịa esenidụt.
N’afọ 2017 niile, otu puku ndị bi na Estonia bịara leta ebe ihe ngosi nka 2,659. Dị ka European Group of Museum Statistics (EGMUS) si kwuo, nke a bụ otu n'ime ọnụ ọgụgụ kachasị elu na Europe.
Edere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke nleta na mpaghara Harju (1.7 nde), ebe Tallinn dị, Tartu na mpaghara ya na-esote ya, yana nleta 900,000, na mgbe ahụ na mpaghara Lääne-Viru na ndị ọbịa 230,000. E nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 242 na Estonia, site na ọdịbendị obodo ọdịnala na akụkọ Soviet ruo na nka mba.
Annely Vürmer, bụ́ onye ntụzi na Board of Estonian Tourist Board, na-ekwu, sị: “Estonia nwere ego buru ibu iji nye ndị njem nleta, site na ụlọ ndebe ihe mgbe ochie nke ụwa na ọdịdị dị ịtụnanya gaa nnukwu nri na ndị na-anabata ndị ọbịa. Ọ bụ akụkọ dị oke egwu maka mpaghara ndị njem na ebe ngosi ihe mgbe ochie anyị nwetara mmụba na ọnụọgụ ndị ọbịa na 2017 ma gaa na Estonia ga-aga n'ihu na-akwado ụlọ ọrụ ahụ ma kwalite Estonia na ụwa dịka ebe dị mma ịga.
N'okpuru ebe a na-edebe ihe ngosi nka kacha elu na Estonia:
Ụlọ ihe ngosi nka Kumu, Tallinn
Site na nnukwu ụlọ ngosi ihe nka kachasị na mba ahụ, Kumu Art Museum mepere na 2006, na-enye Tallinn nnukwu ebe klas ụwa maka nka. A ga-ahụ maka vultures omenala, Kumu na-eje ozi dị ka ụlọ ngosi mba nke Estonia yana ebe etiti maka nka nka. Kumu na-egosiputa ihe osise Estonia nke emere site na 18th rue 21st 2008st. Ihe mgbagwoju anya n'onwe ya bu oru aka ma ewere ya dika ihe omuma nke oge a. Akụkụ na ọnụ ya dị nkọ na-egosipụta ọla kọpa na nzu nzu, nke etinyere n'akụkụ akụkụ nkume nzu. Na XNUMX Kumu natara 'European Museum of the Year Award'.
Museumlọ ihe ngosi nka nke Estonia, Tartu
Thelọ ihe ngosi nka a dị na ọdụ ụgbọ elu Soviet mbụ ma hibe ya na 1909 na mpụga Tartu, obodo nke abụọ kachasị ukwuu na Estonia, etinyere agbụrụ Estonia na agbụrụ ndị mmadụ. Site na ngosi na ihe ngosi mmekọrịta, ndị ọbịa nwere ike ịmụ maka ndụ ndị Estonia kwa ụbọchị kemgbe ọtụtụ narị afọ. The ụlọ oru ngo na-edoghi edoghi nke runway laghachi kwupụta obodo. Emere akụkụ iko ya, nke ejiri ụkpụrụ ọcha mee ya, iji gosipụta osisi ndị gbara ya gburugburu na snow.
Ọdụ ụgbọ mmiri Lennusadam Seaplane - Estonian Maritime Museum, Tallinn
Lọ ihe ngosi nka na-akọ akụkọ ihe mere eme Maritime nke Estonia n'asụsụ ọhụụ ọhụụ. N’ebe a n’ọdụ ụgbọelu ochie, Lennusadam na-enye ndị ọbịa ohere ịhụ ụfọdụ ụgbọ mmiri na okpuru mmiri mara mma, tinyere ọdọ mmiri ebe ndị mmadụ nwere ike iji obere ụgbọ mmiri. Experiencelọ ahụmịhe a na-ahụ maka ihe ọmụmụ ihe omimi mmiri na-ewebata ndị ọbịa na ụwa nke abyss na-adọrọ mmasị site na nnukwu ntanye mmekọrịta na U-Cat, robot nke mmiri n'okpuru mmiri nke Estonia - ị ga-aga eleta maka ndị ọ bụla nwere mmasị na teknụzụ.
GBlọ ihe nkiri KGB, Tartu
Museumlọ ihe nkiri KGB Cells bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị ama na Estonia, nke raara nye mpụ nke ọchịchị Kọmunist na ndị mmegide Estonia. Emeghere na 2001 na Tartu, ụlọ ihe ngosi nka dị n'ime ala nke ụlọ KGB mbụ ebe ebe, n'oge 1940-1954, jidere ndị nkịtị. Ọ na-akọ akụkọ banyere ọtụtụ puku ndị aka ha dị ọcha, ndị gabigara n'ime ụlọ nga ya mgbe ha na-aga n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ n'ogige ụlọ mkpọrọ dị na Siberia.
Ụlọ ihe nkiri obodo Tallinn, Tallinn
Tallinn City Museum gosipụtara akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ site na narị afọ nke 13 ruo ugbu a, nke a na-etinye n'ime ụlọ ahịa ahịa nke narị afọ nke iri na anọ, ụlọ ngosi ihe nka a zuru oke na-enye ọmarịcha akụkọ mmalite nke akụkọ Tallinn. Site na eserese dị iche iche, ụda na ihe dị iche iche, ndị ọbịa na-enweta echiche banyere otu ndị mmadụ si bi na Tallinn n'oge dị iche iche. Ihe nkiri vidio na ihe nkiri slide na-ewebata ihe omume mgbanwe na narị afọ nke 14, akụkọ banyere agha ọgba aghara, nchịkwa Soviet, na n'ikpeazụ Estonia inwere onwe.